Syncari: mampitambatra sy mitantana angon-drakitra miampita asa, manaova automatique ny onjampeo ary mizara ny fahitana azo antoka na aiza na aiza. | Martech Zone
Milentika anaty tahirin-kevitra izay miangona ao amin'ny CRM, automatique marketing, ERP, ary loharanom-pahalalana rahona hafa ireo orinasa. Rehefa tsy eken'ny ekipa miasa tena ilaina ny mombamomba ny marina, dia voafehy ny zava-bita ary sarotra ny tratrarina ny tanjon'ny vola miditra. Syncari dia te-hanamora ny fiainana ny olona miasa op op marketing, op op varotra, op op fidiram-bola izay mitolona tsy an-kijanona amin'ny alàlan'ny angona hahazoana ny tanjon'izy ireo.
Syncari dia mandray fomba vaovao amin'ny fampidirana, automation ary fitantanana data. Mampiorina, manome isa ary manadio data avy amin'ny rafitra ambony rehetrao ny sehatr'izy ireo feno. Tsy toy ny Workato na MuleSoft, Syncari dia manome asa fitantanana data tsy misy kaody mba hanampiana ireo matihanina miasa hiasa ho azy amin'ny alàlan'ny angona itokisany. Ny sehatra fitantanana angon-drakitra avy eo dia mizara ny angona azo antoka sy ny fomba fijery miverina amin'ny departemanta tsirairay loharanon'ny fahamarinana ary tazomy ireo rafitra ireo hifampikasoka rehefa mipoitra ny angona tsara kokoa. Io dia manafaka ny ekipanao amin'ny enta-mavesatra amin'ny fanaraha-maso data sy fanadiovana amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo sy fanamafisana ny angon-drakitra, ny fanamorana ary ny fanafoanana.
Syncari dia fomba tsara kokoa hanavaozana tahirin-kevitra momba ny orinasa. Mampifangaro tokana ny fahaizan'ny FiveTran, trano fitahirizam-boky (oh: Snowflake), ary ny Census / Hightouch amin'ny sehatra iray feno mba hanatsorana ny fampidirana farany hatramin'ny farany. Syncari dia nanangona ny fampidirana, automatisation ary ny fitantanana angona ho sehatra iray feno hanomezana fahafaham-po ny olon-drehetra handamina an'io korontana io amin'ny alàlan'ny fomba voalohany.
Ny Syncari Data Management Platform dia manome:
Modely data natambatra - Ny rafitra rehetra dia mamaritra ny mpanjifa amin'ny fomba hafa kely. Normalinay ho anao ity, ka afaka miteny mitovy ny rafitrao.
Fampandrenesana maromaro - Ataovy mifanaraka hatrany amin'ny angona transactional-patanty mihantona izay mitazona ny fanjakana sy mifehy ny angon-drakitra manerana ny rafitra mifandray.
Fitantanana schema mandeha ho azy - Rehefa ampidirina na esorina amin'ny loharanom-pahalalana ireo sehatra vaovao, dia manavao avy hatrany ny fizotran'ny asa rehetra i Syncari. Veloma manova fanovana!
Fitantanana data angona - Ny politikam-pahefana sy ny angon-drakitra noforonina tao Syncari dia mifandraika amin'ny loharanom-pahalalana rehetra mifandraika amin'ny maodely data natambatra, ahafahan'ny fitoviana data tsy mbola nisy toa azy.
Tsy toy ny nentin-drazana connectors, Syncari Synapses dia mahatakatra tsara ireo drafitra farany momba ny rafitra farany, manome fampidirana lalina ho an'ny hetsika manokana toy ny fampiraisana sy ny famafana malefaka ary ny fitantanana ny fiovan'ny schema isaky ny Synaps mifandray. Ny tranomboky fampidirany dia misy ny Airtable, Amazon S3, Amazon Redshift, Amzon Kinesis, Amplitude, Drift, Eloqua, Intercom, Microsoft Dynamics 365, Freshworks CRM, Gainsight, Google BigQuery, Google Sheets, Hubspot, Jira, Marketo, Mixpanel, MySQL, NetSuite , Fivoarana, Salesforce Pardot, Pendo, PostgreSQL, Salesforce CRM, Sage Intactt, SalesLoft, Snowflake, Andro fiasana, Xero, Zendesk, ary Zuoro.
Mangataha Demo Syncari
Tags: Amazon Hafaingana radialaamazon s3amplitudeAmzon Kinesisautomatiquefanisam-bahoakatsy misy codefampidirana tsy misy kaodyautomatique datafananganana dataangona fitantananasehatra fitantanana datatrano fitehirizana datatarihiny sy ny rano indray mitetesintomina ary atsofohy ny fampidiranamandresyeloquaorinasaangon-drakitra orinasaFivetranFreshworks CRMfifandiranaGoogle BigQueryGoogle SheetshightouchhubspotfampidiranatelefaoninaJiramitantana angonamarketodinamika microsoft 365MixpanelMySQLnetsuitefanentananaPendoPostgreSQLSage Intacttsalesforce crmmpivarotra pardotSalesLoftBohabohan'orampanalaloharanon'ny fahamarinanaWorkdayXerozendeskZuora
May 13, 2021 ao amin'ny 3: 03 PM
Misaotra anao nandrakotra anay. Tena voasoratra tsara izany! Ankasitrahana indrindra ary raha afaka manampy anao amin'ny lafiny rehetra aho dia aza misalasala manatona.
May 14, 2021 ao amin'ny 4: 25 PM
Misaotra ny naoty, Nick! Manantena ny hizara lalindalina kokoa - Efa nandefa fampahalalana sasany amin'ny mpiara-miasa amiko sasany aho.